मनोरञ्जन Archives - Page2of4- Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
‘मिस वर्ल्ड’ले कती कमाउँछन्, जान्नुहोस् ? भारतकी मानुषी छिल्लरले यो बर्षको ‘मिस वर्ल्ड’को ताज जितिन् । यो ताज जितेसँगै उनको चर्चा विश्वभरमा भैरहेको छ । १७ बर्षपछि भारतले यो ताज आफ्नो घरमा भित्राएको हो । तर, तपाइलाई विश्व सुन्दरी प्रतियोगीता जित्ने विजेताले कती पुरस्कार पाउँछन् भन्ने थाहा नहुनसक्छ । यो ताज जित्ने सुन्दरीले पाउने सबैभन्दा…..
ज्याकलिनको पोलमा यस्तो हर्कत
नयाँ दिल्ली – चर्चाका लागि अजिव अजिवका हर्कत गर्ने बलिउड अभिनेत्री मध्य ज्याकलीन फर्नाडिज पनि एक हुन् । उनले हालै एक तस्बिर इस्टाग्राम एकाउन्टमा पोष्ट गरेकी छन् । जुन तस्बिर अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा उनी पोलमा योगको मुन्द्रमा देखिएकी छन् । तस्बिरका साथमा उनले योगिनीका तमासा भनेर समेत पोष्ट गरेकी छन्…..
तपाईंको बच्चामा कार्टुन हेर्ने लत छ ? यसरी हटाउनुस्
कार्टुन हेर्न लागेपछि पूरै दिन बिताउन समेत तयार हुने आफ्नो बच्चाका कारण तपाईं दिक्क हुनुभएको होला । बिहान उठ्नासाथ र राति सुत्नुअघि पनि कार्टुन नै हेर्ने बानी धेरै बच्चामा हुन्छ । अरु त अरु, स्कूलको होमवर्क गर्ने बेलामा पनि कतिपय बालबालिका टीभी खोलेर बस्ने गर्छन् । छोराछोरीमा कार्टुनको लत अहिले धेरै अभिभावकको टाउको दुखाइको विषय…..
नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्मा पछिल्लो समय रुचाईएक ‘रिल कपल’ हो । उनिहरुले सँगै केहि चलचित्र र थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् । हालै पल र आँचल अभिनित नेपाली पप गीत ‘चिटिक्क’को भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सहदेव अर्यालले लेखेको यो गीतमा उदय राज पौडेलको स्वर, संगीत तथा संगीत संयोजन रहेको छ…..
Page2of 1 « Previous 1234Next »